Kedu otu mgba ike si emetụta di na nwunye | Bezzia
Maria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | Mmekọrịta
Ike na-abụkarị otu n'ime ihe kpatara esemokwu ma ọ bụ ọgụ n'ọtụtụ di na nwunye. Powergbasi mgba ike bụ ihe a na-eme mgbe niile na ihe omume, ihe na-anaghị abara di na nwunye ahụ uru. Ihe na-akawanye njọ mgbe pati nke nwetara ike ji ya mee ihe maka uru nke ya ma ghara iji ya mee ka mmekọrịta nke ndị ọzọ ka mma.
N'isiokwu na-esonụ anyị ga-ekwu maka mgba ike di na nwunye na otú ọ ga-esi emebi mmekọrịta ahụ.
1 Na mgba maka ike n’alụ di na nwunye
2 Nsogbu n'ihi ike mgba di na nwunye
Na mgba maka ike n’alụ di na nwunye
Utingkesa ikike n’ime di na nwunye ahụ abụghị ọrụ dị mfe ma ọ bụ dị mfe. Kwesịrị iburu n'uche mkpa nke mmadụ abụọ ahụ ma ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ nwere ike bụrụ na ihe ga-akwụsị n'ụzọ ọjọọ. Ihe dị mma bụ na ka oge na-aga, ikike ahụ e kwuru na mbụ ga-adaba na onye ọ bụla na-eji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge ụfọdụ.
Ọ pụghị ịbụ na n'ime mmekọrịta ụfọdụ, ọ bụ naanị otu onye nwere ikike ahụ ma onye ọzọ na-ejedebe naanị ịnabata mkpebi nke onye ọzọ. Ka oge na-aga, ịchịisi dị otú ahụ nwere ike ibutere onye òtù ọlụlụ nnukwu nsogbu na mee ka mmekọrịta ahụ daa mbà.
Nsogbu n'ihi ike mgba di na nwunye
Ike mgba nke na-eme mgbe niile n'ime di na nwunye, ọ nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu:
O nwere ike ịbụ na ike ịlụ ọgụ bụ n'ihi n'eziokwu na mmadụ abụọ ahụ chọrọ iweghara ọrụ kachasị. Ndi mmadu abuo choro ka ha zie ezi mgbe nile, na-akpata ogba aghara na agha n’oge obula. Ọ dịghị onye n'ime ha na-enye ogwe aka ha ighikota na nke a na-eme ka ibikọ ọnụ bụrụ ihe mgbagwoju anya ma sie ike. N'okwu ndị a, ọ dị mkpa inwe ọmịiko na onye òtù ọlụlụ dị ka o kwere mee ma tinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ nke onye ọzọ.
N'otu ụzọ, esemokwu dị iche iche nwere ike ibilite na ọnweghị onye n'ime di na nwunye ahụ, chọrọ iweghara ike na ịchị. Enweghị nchebe n'ime di na nwunye ahụ karịrị ihe doro anya na nke a na-emebi mmekọrịta ahụ n'onwe ya. N'okwu a, ọ dị mkpa ikpughe echiche dị iche iche wee si ebe ahụ butere ụzọ.
Na nkenke, enwere ike ịlụ di na nwunye dị ka ihe nkịtị na ekwesịghị ịbụ ihe ọjọọ, ọ bụrụhaala na ike na ikike dị otú ahụ adịghị emerụ akụkụ nke ọzọ nke di na nwunye ahụ. A ga-enwerịrị nguzozi n’ike nke onye ọ bụla nwere n’ime mmekọrịta ya. Ihe na-adịghị mma nye di na nwunye a bụ na nkesa ike a bụ ihe kpatara esemokwu na-aga n'ihu n'ụdị niile.
Ọ bụrụ na nke a mee, ọ ga-adị mkpa ịnọdụ ala ma kwurịta okwu nwayọ ma guzobe usoro nkwekọrịta dịka eziokwu nke onye nwere ike ịlụ di na nwunye ahụ. Dị ka o kwesịrị, ike ga-agbanwe aka dịka mkpebi dịgasị iche iche a na-aghaghị ịme n'ime mmekọrịta ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọnọdụ ahụ nwere ike ịbụ nke a na-apụghị ịkọwa ekwenye na ihe ọjọọ niile nke a gụnyere maka di na nwunye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Otu nsogbu ike si emetụta di na nwunye
Etu esi kpopu ahihia otubo